गृहमन्त्री खाँणलाई घाइतेका बुवाले अस्पतालमै थर्काए ! Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
गृहमन्त्री खाँणलाई घाइतेका बुवाले अस्पतालमै थर्काए !
बुटवलः गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण आफ्नै कार्यकर्ताबाट कुटिएका पार्टीकै अर्का कार्यकर्ता भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। तर अस्पतालमा कुटिएका कार्यकर्ता शैलेस पन्तका बुवाले मुखभरिको जवाफ फर्काएपछि गृहमन्त्री खाँण अवाक् बने।
कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनअन्तर्गत प्रदेश सभा क्षेत्रतर्फ रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ (क)मा निर्वाचनपछिको मतगणनाको क्रममा खाँण समूहका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट क्षेत्र नं. ३ का सचिव पदका उम्मेदवार समेत रहेका शैलेस पन्तसहित ५ जना कांग्रेस कार्यकर्ता घाइते भएका थिए।
गृहमन्त्री खाँणका भाइ रामकृष्ण खाँणको निर्देशनमा तरुण दल रुपन्देहीका अध्यक्ष सोमबहादुर गुरुङको नेतृत्त्वमा गएको समूहले आफ्ना उम्मेदवार तथा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको रामचन्द्र पौडेल समूहको आरोप छ।
उक्त समूहको आक्रमणबाट नाकमा गहिरो चोट पुगेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत पन्तलाई भेट्न गृहमन्त्री खाँण आइतबार अस्पताल पुगेका थिए।
पन्त भेट्न अस्पताल पुगेका गृहमन्त्रीलाई पन्तका बुवा राजन प्रसाद पन्तले ढोकाभित्र छिर्नासाथ मुखभरिको जवाफ फर्काएपछि उनी अवाक् बनेर उभिरहे।
'हामीलाई कसैको सहानुभूति चाहिएको छैन, सक्नुहुन्छ भने आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्नुहोस', छोरासँगै अस्पतालमा रहेका राजनले खाँणलाई भने।
०२४ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील राजन पूर्वकेन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। उनी अहिले पनि पाल्पाको तानसेनमा कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय छन्।
'५८ वर्ष भयो कांग्रेसको राजनीतिमा छु, पाल्पामा माओवादीसँग पनि लडेर बसें तर अहिले पार्टीले यस्तो पुरस्कार दियो', पन्तले भने।
अध्ययनको क्रममा भैरहवा आएका शैलेस पन्त पनि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट स्ववियू सभापति भइसकेका हुन्।
अहिले पनि उनी भैरहवामा रहेर पार्टीको काममा निरन्तर सक्रिय छन्।
आफूलाई भेट्न पुगेका गृहमन्त्री खाँणसामु घाइते पन्तले आफूमाथि आक्रमण गर्ने सोमबहादुर गुरुङलाई कारबाही गर्न माग गरे।
'सोमबहादुर गुरुङलाई कारबाही हुनुपर्छ दाइ, भैरहवामा माओवादीले बन्दुक तेर्स्याउँदा पनि विचलित नभई बसें, कांग्रेस छोड्न सकिनँ तर अहिले कांग्रेसबाटै आक्रमणमा परेको छु', उनले भने।
गृहमन्त्री खाँणसँगै अस्पताल पुगेका रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीलाई देखाउँदै पन्तले भने –'एसपी सा'ब यहीँ हुनुहुन्छ, आक्रमणमा संलग्नविरुद्ध आज नै उजुरी दर्ता गर्न निर्देशन दिनुस।'
गृहमन्त्री खाँण २ मिनेट ३६ सेकेण्ड मात्रै पन्तसामु बसे। त्यसपछि उनी आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन समेत नदिई त्यहाँबाट बाहिरिए।
'तपाई पहिले ठीक हुनुस्, घटनामा संलग्नलाई पार्टीले पनि कारबाही गर्छ', खाँणले भनेका थिए। तर पन्तले भने पार्टीले कारबाही गर्ने विषय गौण भएकोले पहिले कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।
२०७८ मंसिर ०७ गते १२:४५ मा प्रकाशित